Europe dị ka kọntinent dị iche iche, Europe na-eweta ihe ọ bụla ụdị njem - atọ ụtọ ata aru gụnyere. Ma ebe ga gị uto buds ike ụtọ kasị? Kedu nri eserese ga-enwe gị Instagram egwu elu 100 na nke amasị? Kwụsị na-eche ma na-amalite munching. Erite Europe Best Food Places na anyị n'elu họpụta mmadụ!
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe savory, ị ga-abụ obere of nhọrọ maka cheese. Ha na-n'ụzọ nkịtị na okporo ámá niile. Ihe kachasị amasị anyị? A sirop waffle ugbua ka enwere abụọ mkpa waffles, miri emi-eghe na gooey ịdị mma n'ime na topped oyi na powdered sugar.
Olee otú anyị ọbụna na-eche nke na-akpọ Europe Best Food Places na-agụnye ọ bụghị Italy! Ọ bụ n'ebe a European mba ọzọ iconic nri? Nnọọ, carbs! Pizza na pasta nọ na ndepụta onye ọ bụla! Naanị cheta na mpaghara ọ bụla nwere ọpụrụiche ya ma dabere na oge.
Nke a nwere ike ịbụ otu n'ime Europe Best Food Places ma ọ dịghị abịa na-enweghị a ịdọ aka ná ntị: Enwere ike iji “entrée” n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa ịpụta “isi nri,"Ma na French, ọ pụtara n'ezie "appetizer."Ya mere, na-arapara na" entrée "maka appetizer na" plat "maka isi nri, na ị ga-esi na n'akụkụ nke ọzọ na a full afo na a akwa ahụmahụ.
London nri idaha bụ ka akụkụ nke Europe na Best Food Places ruo mgbe anyị maara ihe ga-esi na-Brexit. London idaha bụ a Kakemish-Mash nke omenala culinary ọhụụ na oge a na ọhụrụ. Ọ dịghị nri-centric njem iji London zuru ezu na-enweghị dịkarịa ala otu ehihie tii, a Sunday anụ na obi ụlọ mmanya so a pint of bitters ma ọ bụ ụfọdụ takeaway azụ na ibe site na otu nke obodo ọtụtụ 'chippies.’ Ọ bụrụ na Michelin-starred esi ndị ọzọ gị ihe, mgbe ị ka na-nri ebe. Enwere ụlọ nri ise ugbu a na UK nke nwere kpakpando Michelin atọ. The Waterside Inn, Alain Ducasse na Dorchester, The Araki, Restaurant Gordon Ramsay, na abụba Duck.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fexperience-europes-best-food-spots%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)